Igumbi elizimeleyo laseNottingham.Kumgangatho owahlukileyo
Igumbi lokulala elitofotofo eliphindwe kabini kumgangatho owahlukileyo, umatrasi wobutofotofo wenkumbulo. Ilungele izibini, abantu abahamba bodwa, ikhefu lokukhwela ibhayisekile, abahambi beshishini, abanobuhlobo be-LGBT, abahlobo abanoboya bamkelekile. Igumbi lokuhlala lakho. Iibhasi eziya ngqo kwiziko lesixeko saseNottingham. Izidlo zangokuhlwa ngamalungiselelo. Izitebhisi ezibandakanyekayo, i-ergo ayifanelekanga iindwendwe ezikhubazekileyo, nceda uqaphele igumbi lokuhlambela likwinqanaba elahlukileyo.
Ikhaya elinobubele kwizilwanyana, yiza neyakho ukuze uhlale nawe.
Ukufikelela ngokulula kwi-M1 junction 26. Zonke izinto eziluncedo ezikufutshane neevenkile ezininzi njl. Indawo yokuzalwa ka-D H Lawrence, iindawo ezininzi zokuhamba zelizwe kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. IChatsworth, iWollaton House, igadi yeZen, kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane kunye namakhaya amahle akufutshane.
Ubuhlobo obufudumeleyo, abantu kunye nezinja.